Iyo Periodic Tafura YeMukati Kushambadzira | Martech Zone
Svondo, June 21, 2015 Chipiri, June 23, 2015 Douglas Karr
Makumi gumi apfuura, kushambadzira zvemukati kwakaratidzika kunge kuri nyore, handizvo here? Chinyorwa chine mufananidzo chakaita zvishamiso uye chaigona kushandiswa mune yakanangana tsamba chidimbu chakatumirwa pane webhusaiti yekambani. Nekukurumidza kumberi uye iri kuve yakaoma nzvimbo yakaoma. Uku kuratidzwa kwenzvimbo yekushambadzira yemukati setafura yePeriodic, zvine hungwaru. Yakagadzirwa na Chris Lake, Director weChigadzirwa Chekuvandudza paEconsultancy.
Dzvanya pane yekutarisa pane yedu saiti kuti uwane iyo mufananidzo uzere, zvakakodzera kudhinda uye kuisa padhesiki rako. Kana pamwe pabhodhi raunogona kukanda dhadha uye woisa pfungwa dzako pazuva iro pane yakasarudzika nzira, fomati, mhando, chikuva, metric, chinangwa, chinokonzeresa kana kungo dzokera kumashure nekugadzirisa zviripo zvirimo! Muvhiki yapfuura, semuenzaniso, takaenda pamusoro pezana zana zvinyorwa paMartech kugadzirisa mamaki, mavhidhiyo, zvemukati, kana mifananidzo. Isu tadzimawo akati wandei gumi nemaviri ezvinyorwa pane tekinoroji kana zvakapfuura zviitiko izvo zvisingachapa chero kukosha pane ino saiti.
Mashandisiro ekushandisa iyo Periodic Tafura YeMukati Kushambadzira
Pairi, Chris anofamba kuburikidza neye7-nhanho nongedzo kune zvemukati kushambadzira kubudirira, kutanga nezano uye kupedzisa nekaviri-kutarisa uye kugadzirisa basa rako.
nzira - Iyo yakakosha kiyi yekubudirira. Kuronga uye kutarisisa kwakakosha. Unoda zano rakajeka, rakatemerwa kune ako erefu-ebhizinesi zvinangwa. Econsultancy zvakare ine inobatsira zvikuru yakanakisa tsika gwara pane zvemukati zano.
urongwa - Zvemukati zvinouya mumhando dzakasiyana uye saizi. Ziva kuti iwe unogona kushandisa akawanda mafomati echikamu chimwe chete chemukati.
Rudzi rweMukati - Izvi zvinoenderana ne mhando dzakajairika dzezvinyorwa izvo zvinoshanda nemazvo kuEconsultancy.
chikwiriro - Aya ndiwo mapepa ekuparadzira zvemukati. Unogona kunge uine zvimwe zveizvi (semuenzaniso # 59, webhusaiti yako). Zvimwewo nzvimbo dzekudyidzana (yako wega, yako network, yechitatu mapato). Zvese izvi zvinobatsira kuparadzira izwi nezve yako zvemukati.
Metrics - Izvi zvinokubatsira kuyera mashandiro ezvako zvemukati. Nechinangwa chekupfupika, metric dzakarongedzwa pamwechete (semuenzaniso kutora metric).
zvinangwa - Zvese zvirimo zvinofanirwa kutsigira zvinangwa zvako zvebhizimusi zvekutanga, kungave kuri kuburitsa traffic zhinji, kana kutengesa zvimwe, kana kuwedzera ruzivo rwe brand. Laser-inotungamirwa zvemukati inoratidzira mashoma emabhokisi aya.
Kugovana Zvinokonzeresa - Izvi zvinonyanya kufemerwa na Dzisingadzoreki Media zvinokonzeresa zvekugovana zvemukati. Funga nezve vatyairi vanonzwa kumashure kwekugovana, uye ita shuwa kuti zvemukati zvaunogadzira zvinoita kuti vanhu vanzwe chimwe chinhu.
kuongorora - Zvese zvirimo zvinofanirwa kuve zvakagadziriswa zvakanaka pakutsvaga, zvemagariro, uye kutsigira zvinangwa zvebhizinesi rako.
Tags: zvemukati mafomatiContent Marketingzvemukati yekutengesa yekutarisazvemukati zvinangwa zvekushambadzirazvemukati metriczvemapuratifomuzvemukati zvekugovana zvinokonzerazvemukati zanomhando dzemukatiperiodic tafura yezvinhu
Makuru Makuru ane Dambudziko, Peya Ine Solution
Jun 22, 2015 pa8: 04AM
Mufananidzo wacho hauna kunyatsogadziriswa zvakakwana… kana isu tichiedza kuupurinda, hazvibvumike. Pfungwa yakanaka zvakadaro!
Jun 22, 2015 pa 10: 44 PM
Hechino chinongedzo chakananga kurodha yakakwira resolution resolution kubva kune yavo saiti - ndinovimba inobatsira! batanidzo
Jun 22, 2015 pa8: 34AM
Doug - rakakura sei blog uye rakangwara, rakangwara pfungwa! Ida iyi pfungwa !!! Wangu mainjiniya murume, anozvidza zvinhu zvese kushambadzira, akatofunga kuti zvainakidza. Iwe haumbokundikana kuendesa hukuru zvemukati mune inonakidza, nzira itsva. Ndatenda! Kathy
Jun 22, 2015 pa 10: 43 PM
Kutenda zvikuru, Kathy! Ini ndakanyatso kukoshesa masarudzirwo akaitwa zano iri zvakare! Econsultancy inokodzera rukudzo rwese.
Jun 23, 2015 pa4: 27AM
Hei Doug - ndangoda kuti nditi kuvonga nekuda kwePeriodic Tafura rudo! Ini ndinoramba ndichizvininipisa nemhinduro yacho. Hapana pun yakanangwa ..; )
Jun 23, 2015 pa 12: 39 PM
Chris, handigoni kukutenda zvakakwana. Handikwanise kufungidzira basa rakapinda mune rino!
Mar 11, 2016 pa 4: 14 PM
Mufananidzo wakanaka chaizvo! Kwakanaka zviwanikwa.
Aug 30, 2016 pa 8: 19 AM
Izvi insaaane! Uber geeky, Douglas! Ini ndinoda tafura ye periodic uye handina kumbotarisira kuwana chakadai. Ndatenda! 🙂
Aug 30, 2016 na5: 16 PM
Ndakafunga kuti yaive yakanaka zvakare! Kudos kune vagadziri.